शिक्षक तथा प्र.अ.ले गरे पुस्तकमा लुट – कमल खबर
गृह/प्रदेश/शिक्षक तथा प्र.अ.ले गरे पुस्तकमा लुट
प्र.अ.को मिलेमत्तोमा बिद्यालय अगाडी पुस्तक बिक्रि
विश्व कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त छ । सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिदैँ विगत दुई महिना देखि लकडाउन गरिरहेको छ । अति आवश्यक उद्योगहरु बाहेक अन्य व्यापार व्यवसाय बन्द छन । सरकारले पुस्तक व्यवसायलाई पनि अति आवश्यक क्षेत्र मानेको छ । धेरै जसो प्राइभेट विद्यालयहरुले यो शैक्षिक सत्रको लागि गत शैक्षिक सत्रमा नै लगाएका प्रकाशनका पुस्तकहरुलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । विद्यार्थीहरुलाई घरमा नै बसेर अनलाइन कक्षाहरु संचालन गर्न तथा गृहकार्य दिनको लागि पुस्तकहरु किन्नको लागि सरकारले स्टेशनरीहरु खोल्न दिने निर्णयसँगै विद्यार्थीहरुले आफ्नो नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि पुस्तकहरु किन्न थालेका छन् ।
नेपालका प्रायः प्राइभेट विद्यालयहरुले प्राइभेट पब्लिकेसनका पुस्तकहरु चलाउँदै आएका छन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि प्राइभेट प्रकाशसनका केही पुस्तकहरु चलाउँदै आएका छन् । यो शैक्षिक सत्र कोभिड १९ को महामारीमा छ । कतिपय जिल्लाका विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्रको अन्तिम परिक्षासमेत लिन पाएनन् । तथापि अगाडि लिएका परीक्षाहरुको आधारमा अन्तिम नतिजा निकाली शैक्षिक सत्र टुङ्ग्याएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिको कारण प्राइभेट विद्यालयले पनि पुस्तक सूची पुरानै चलाउने निर्णय गर्दा गर्दै कतिपय सामुदायिक विद्यालयले नयाँ पुस्तक सूचि निकाले । कतिपयले अनुगमनको हुन्न भनेर विद्यालय हाता भित्रै शिक्षकहरुले सिजनल व्यापार गर्दै आए । नेपालभर विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै विद्यार्थीहरु तथा अभिभावकहरुलाई आर्थिक भारमा पार्दै नेपालभर विद्यालयहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा व्यापार गरेको देखिन्छ र भेटिन्छ । झापामा एउटा यस्तै घटना भयो ।
गत शैक्षिक सत्रमा सरस्वती मा.वि. इटाभट्टा, दमकमा गत वर्ष विद्यार्थीहरुलाई कक्षा १० का सम्पूर्ण पुस्तकहरुको सेट ८ सय ४५ मा विक्री गरेको थियो भने यस शैक्षिक सत्रमा २ हजार ४ सय रुपैँया भन्दा बढीको पुस्तकहरु विक्री गरियो । अझ त्यसमा पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका केही पुस्तकहरु बाँकी नै छन् । यसरी विद्यार्थीलाई यो पनि सामुदायिक विद्यालय जहाँ न्यून आय भएका अभिभावकहरुका छोराछोरीहरु पढाइन्छ । एकातिर वार्षिक रुपमा पुस्तक परिवर्तन गर्नु विद्यालय, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई नै अफ्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भने अर्कातिर अभिभावकलाई आर्थिक भार बढ्छ । विद्यालयले पुस्तक सूची परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रधानाध्यापक तथा विषय शिक्षकहरुलाई हुन्छ भन्दै विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक भार पार्न गत वर्षको शैक्षिक सत्रमा ८४५ का पुस्तकले पुग्ने यस शैक्षिक सत्रलाई चाहि २४०० भन्दा माथिका पुस्तकहरु चाहिने ?
यस विषयमा विद्यालयका प्र.अ.सँग जिज्ञाशा राख्दा गत वर्ष लगाइएका पुस्तकहरु गुणस्तरहिन भएको र विद्यार्थीको खुराक नपुग्ने हुँदा परिवर्तिन गरिएको बताउनु भयो । यस्तै पुस्तक पसलका संचालक तथा सोही विद्यालयका शिक्षकले आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको र प्रधानाध्यापकलाई जानकारी रहेको बताउनु भयो । आफूसँग यस्तो गम्भिर विषयमा समन्वय नभएको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले दुखेसो व्यक्त गर्नु भयो । कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको समयमा लकडाउनले बिहान बेलुका के खाउँ, कसो गरुँ भइरहेका अवस्थामा अभिभावकलाई भार पार्नु नहुने बताउँदै विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापकले सामुदायिक विद्यालयको मर्म र भाव नबुझी वार्षिक रुपमा पुस्तकको सूची परिवर्तन गर्न नहुने बताउनु भयो । गत वर्षका पुस्तकहरु र यस वर्षका पुस्तकहरुको मूल्य अन्तरको बारेमा कुरा गर्न खोज्दा प्रधानाध्यापकले यस विषयमा कसैले राजनीति गर्न खोजेको बताउँदै केही केही प्राइभेट प्रकाशनका पुस्तकहरु महङ्गो भएकोले मूल्य अन्तर रहेको बताउनु भयो । जनक शिक्षा सामग्रीका पुस्तकहरुको रकम फिर्ता आउने बताउँदै प्रधानाध्यापकले आफूलाई १ सेटको सम्पूर्ण मूल्य कति पर्ने हो थाहा जानकारी नभएको पनि बताउनु भयो ।
कोभिड १९ ले शैक्षिक रुपान्तरणको बाटो खोजिरहेको छ । समय सापेक्ष शैक्षिक रुपान्तरणको लागि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय पाठ्यक्रममा करोडौँ लगानी गरिरहेको छ । समयको माग अनुसार विकास पनि भइरहेकोे पाइन्छ । कोभिड १९ ले ल्याएको परिवर्तन डिजिटलाइज्ड शिक्षा पद्धति हो । यस विषयमा सरकारको ध्यान अवस्य पनि गैरहेको हुनुपर्छ अथवा डिजिटल युगमा प्रवेशको लागि बामे सर्नुपर्छ । हालका पुस्तकसम्म आइपुग्नको लागि पनि सरकारको करोडौँ खर्च र विषय तथा पाठ्यक्रममा विज्ञहरुको अथाह लगानी भएको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका पुस्तकहरुमा गुणस्तर नभएको भन्दै प्राइभेट प्रकाशनका पुस्तकहरु लगाएको पाइन्छ । सरकारले गरेको लगानी तथा विषयविज्ञहरुको अथाह मिहेनतलाई अवमूल्यन गदै सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरहीन पुस्तक भन्दै प्राइभेट प्रकाशनका पुस्तकहरु लगाएर विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक भार पारिरहेका छन् । कतै प्राइभेट प्रकाशनसँगको मिलेमत्तोमा प्रधानाध्यापक तथा विषय शिक्षकले विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक भार पार्न तत्पर भएका त होइनन ?